England Archive - Gool FM - page 2	twitter
CEEBEEY TACAAL: Paul Pogba oo ay saddex bilood ku qaadatay inuu iska bixiyo lacago yar uu ku lahaa nin Xamaali ah!!
(Manchester) 21 Mar 2017. Ugu yaraan saddex bilood ayaa la warinayaa inay ku qaadatay laacibka ugu qaalisan kubbada cagta adduunka ee Paul Pogba inuu iska bixiyo lacago 100 bound oo qura uu nin Xamaali ah ku lahaa.
Sheekada waxaa xiiso u sii yeelaya inay Pogba ku qaadato oo kaliya 3-daqiiqo iyo 47-ilbiriqsi inuu helo 100 bound.
Kondi Moyo iyo saaxiibkii ayaa la siin waayay lacagaha xamaaliga kaddib markii ay alaabo u qaadeen xiddiga reer France mar uu guri cusub guurayay bishii December.
Messi oo loo xiray maaliyado kala duwan oo kooxo waa wayn…. (Middee ayuu ku nuurayaa?) + SAWIRRO
(Barcelona) 21 Maarso 2017 – Laacibka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa heshiiskiisa sii dhacayaa, xilli aysan waxba ka soo bixin wada hadalladii heshiiska loogu kor dhinayay.
Shabadda ciyaaraha ee Goal.com ayaa maaliyado kala duwan u xiray laacibka ugu fiican kubbada cagta Adduunka ee waqtigan.
Haddaba daawo sawirrada ee aragtidaada ka dhiibo midkee ayuu ku soo baxayaa Messi?.
Mesut Ozil oo seegaya kulanka saaxiibtinnimo ee xulkiisa Germany la ciyaarayo England… (Waa kuwee xiddigaha kale ee maqan?)
(Dortmund) 21 Maarso 2017 – Tababaraha xulka qaranka Germany ee Joachim Low ayaa xaqiijiyey in Mesut Ozil uusan ciyaari doonin kulanka saaxiibtinnimo ee ay la leeyihiin xulka England, kaasoo Arbacda ka dhacaya magaalada Dortmund.
Xiddiga kooxda Arsenal ayaa la dhibtoonaya dhaawac muruqa ah, kaasoo seejiyey kulankii ay kooxdiisa Gunners guuldarrada 3-1 kala kulantay Sabtidii naadiga West Bromwich Albion ee ka dhacay garoonka Hawthorns.
Low ayaa sharkiisa jaraa’id maanta ku xaqiijiyey in Ozil uusan taam buuxa ahayn si uu u ciyaaro kulanka ay 
Mesut Ozil oo isaga tagaya Arsenal kaddib markii ay isku dheceen Arsene Wenger
(London) 21 Mar 2017. Mesut Ozil ayaa xagaagan gali doona sanadkiisii ugu dambeeyay ee heshiiska uu kula joogo Gunners waxayna u badan tahay inuusan qandaraaska kordhin doonin.
Ozil ayaa seegay kulankii dhawaa ay Gunners guul darrada3-1 ka kulantay kooxda West Brom sababo dhaawac oo dhanka muruqa ah.
28-jirka ayaa sidoo kale ka maqnaa guul daradii 3-1 ay kala kulmeen kooxda Liverpool, inkastuu ka soo muuqday kursiga keydka lugtii labaad ee wareega 16-ka Champions League ay guul darada 5-1 kala kulmeen Bayern Munich.
Bastian Schweinsteiger oo fariin damqasho leh u soo diray taageerayaasha Man United isla markaana sheegay sababta uu uga tagay kooxda
(England) 21 Mar 2017. Manchester United ayaa ogolaatay in Bastian Schweinsteiger uu kooxda ka tago isla markaana ku biiro kooxda Chicago Fire ee ka ciyaarta horyaalka MLS ee Mareykanka.
32-jirka ayaa saxiixay heshiis hal sano ah oo ku kacaya usbuuciiba 70,000 oo bound kaa oo leh dookh uu sanad kale ugu darsan karo.
Schweinsteiger ayaa fariin damqasho leh u soo diray taageerayaasha Red Devils kaddib markii la xaqiijiyay inuu kooxda ka tagayo.
“Waan murugeysanahay inaan ka tago saaxiibo badan aan ku leeyahay Manchester 
Goolhaye Petr Cech oo Rikoodh cusub dhigay kaddib markii uu ku guuleystay laacibka sanadka ee dalka Czech
(Europe) 21 Mar 2017. Goolhayaha kooxda Arsanal Petr Cech ayaa ku guuleystay laacibka sanadka ee dalkiisa Czech markii sagaalaad taa oo noqotay Rikoodh cusub.
Gool ilaaliyaha Gunners oo isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah kaddib koobkii Euro ee xagaagii la soo dhaafay ayaa abaal marintan ku garaacay Vladimir Darida ee u ciyaara Hertha Berlin iyo Borek Dockal oo ka ciyaaraha Shiinaha kaa oo saddexaad galay.
Codka abaal marinta laacibka ugu fiican ee dalka Czech waxaa go’aamiya ciyaartoyda, tababarayaasha, iyo saxafiyiinta.
Bastian Schweinsteiger oo usbuucan ka tagaya Man United kuna biiraya…
(England) 21 Mar 2017. Bastian Schweinsteiger ayaa ka tagaya Manchester United si uu ugu biiro kooxda Chicago Fire ee ka ciyaarta horyaalka MLS ee dalka Mareykanka.
Kooxda ka ciyaarta MLS ayaa warkan xaqiijisay isniintii iyadoo rugcadaaga reer Germany la filayo inuu la midoobo kooxda Veljko Paunovic usbuuca soo socda sida uu warinayo Chicago Tribune.
32-jirka ayaa kooxdan ugu biiray heshiis hal sano ah oo usbuuciiba ku kacaya 70,000 oo bound kaa oo leh dookh uu sanad kale ku saxiixi karo.
“Waayaheyga ciyaareeda waxaan 
Sir Alex Ferguson oo dib u qabanaya xilka tababaranimo ee Man United
(England) 20 Mar 2017. Arrinkan wuxuu farxad galinayaa taageerayaasha Man United wuxuuna naxdin wayn ku yahay kooxaha kale laakiin sheekadu ma ahan sidaad moodo.
Sir Alex Ferguson ayaa dib u qaban doona xilka kooxda Man United kulanka sagootinta ee loo dhigi doono rugcadaaga kooxdan ee Michael Carrick.
75-jirka ayaa 38 koob kula guuleystay Man United intii uu ka arriminayay gegada Old Trafford, xilka tababaranimo ayuu iska casilay sanadki 2013 markii uu u gacan galiyay horyaalkoodii 23-aad.
Yeelkeede, waxaa iminka la xaqiijinayaa inuu dib 
Waqtiga la ciyaari doono kulankii baaqday ee Derby Manchester ee Unied iyo City oo la shaaciyay
(Manchester) 20 Mar 2017. Waxaa la shaaciyay goorta la ciyaari doono kulankii baaqday ee Manchester Derby ee kooxaha Man United iyo Man City.
Kulankaa ayaa la baajiyay sababo la xiriirta in wiilasha Jose Mourinho ay ku lug lahaayeen tartanka EFL Cup iyagoo koobka 3-2 uga qaaday kooxda Southampton.
Manchester Derby ayaa la ciyaari doonaa Maalin Khamiis ah 27-ka bisha Abriil marka ay saacada geeska Afrika Tilmaameyso 11:00 habeenimo.
FIXTURE BULLETIN!  #mcfc
Kooxda ugu xun Usbuuca ee Premier League oo la soo saaray….(Arsenal oo xiddigaha ugu badan ku leh)
(England) 20 Mar 2017. Warsidaha Goal ayaa shax ka sameeyay xiddigihii ugu xumaa Premier League Usbuucan iyadoo ay Arsenal ku leedahay afar laacib.
Gunners ayaa guul darro 3-1 kala kulantay kooxda West Brom iyadoo halis ugu jirta inay sanadkaan wayso xitaa kaalinta afaraad.